Saturday August 08, 2020 - 17:22:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar istish-haadi ah oo maanta ka dhacay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kaasi oo lala beegsaday saldhig Melleteri.
Khasaaraha ka dhashay weerarkii lagu beegsaday saldhigga guutada 27aad ee ciidamada melleteriga dowladda ayaa aad u kordhay, war kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in dhimashadu ay gaartay 24 askari oo ay ku jiraan saraakiil sarsare.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in 32 askari ay ku dhaawacmeen weerarkii naf hurnimo ee ka dhacay dhabarka dambe ee xaruntii Xisbiga degmada Wardhiigleey.
Wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxa ay ku gubteen laba gaari Tikniko ah iyo gaari jeemis ah oo uu ku rakibnaa qori Zuug ah, sidoo kale 2 gaari Cabdi bilayaal ah ayay waxyeella xooggan kasoo gaartay weerarkii maanta.
Qaraxii aadka u xooganaa ee loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay ayaa sababay in qeyb ahaan ay gubatay xerada melleteri oo talis u aheyd guutada 27aad ee ciidamada Melleteriga dowladda Federaalka.
Waa isbuucii labaad oo si xariir ah ay Al Shabaab weeraro naf hurnimo uga fulinayso magaalada Muqdisho waxaana guuldarraystay dhammaan dadaalladii ay dowladda Federaalka ku sugaysay ammaanka xarumaheeda muhiimka ah.